Umkhankaso ongentsha kaZulu – Bayede News
OMdala uthi ikusasa likaZulu likuyo intsha
UMBONO NGEKUSASA: ONgangezwe Lakhe Isithombe: Igunundu Agency/Nhlanhla Mtaka
OMdala uthi ikusasa likaZulu likuyo intsha ngakho kumele icijwe ngolwazi
Iminyaka emithathu ezayo izokhumbuleka emlandweni njengeminyaka yokubuthwa kwentsha kaZulu. Lawa ngamagama ashiwo yiSILO engxoxweni ekhethekile nelaboHlanga eMkhosini Womhlanga waminyaka yonke. OMdala uthe ikusasa likaZulu likuyo intsha ngakho kumele kuqalwe kuthululelwe kuyo ulwazi oluyoyihlomisela ikusasa.
“UZulu ungalenzi iphutha lokucabanga ukuthi impi esibhekene nayo ngeyamanje. Empeleni abazama ukusikheqa manje bahlose ukushabalalisa ikusasa lethu. Ngakho njengesizukulwane samanje kuwumsebenzi wethu ukuvikela isizukulwane esizayo. Yingakho kule minyaka emithathu ezayo ngihlose ukubutha nokubumba intsha kaZulu, abesilisa nabesifazane. Engikwenzayo ngenzela ikusasa ngoba ngiyayibona eyabafo ihlomela ehlathini ngenhloso yokuqeda ngobuZulu,” kusho Omdala.
Enkulumweni yakhe ezinkulungwaneni zezintombi namalungu omphakathi ngesonto eledlule Omdala uxwayise uZulu ngalabo ababiza ngabazonda uZulu noBukhosi nathi basemkhankasweni wokuqeda ngoZulu nobuZulu.
“Eminyakeni engama-25 kwatholwa idemokhrasi abantu sebeyehluleka ukuzibamba, bayehluleka ukubekezela ubukhona bethu njengesizwe noBukhosi. Abasifuni, bayasenyanya futhi bayasesaba. Ubukhona bethu buyinkinga kubo ngakho bafisa sithenwe” kububula iMbube yomhlaba.
Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi phakathi kwezinhlelo ezikhona zokubutha intsha kaZulu wukusatshalaliswa kwezinhlelo zoMkhosi woSelwa oba ngoZibandlela. Olunye uhlelo ISILO esizolwethula eGauteng emasontweni amathathu ezayo yilo lwenhlangano yabafundi abangaMaZulu abakwangqondonkulu kanye nasemabangeni aphansi. Lolu hlaka ngeke lugcine kuleli kepha luzoqoqa intsha kaZulu nangaphandle kwemingcele.
Kulokhu iSILO sithe: “Uhambo lwaseGoli njengoba ngazise isizwe lumqoka kakhulu ngoba luyisiqalo sokwakha uZulu wakusasa. Isiqalo sikubafundi okuyibo abasempini nsukuzaphuma ngenxa yohlobo lwemfumdo ehlelelwe ukuba bebuze kulokho abayikho. Ethi ulimi lwabo alukho mqoka, ethi uBukhosi abungahlonishwa kuqhakanjiswe into ebizwa ngedemokhrasi nayo ehlanekezelwayo,” kuphetha Omdala.